रेलको वास्तविकता : काम गर्ने कालु मकै खाने भालु « Media Club Nepal
२ आश्विन २०७७, शुक्रबार १८:३३
रेलको वास्तविकता : काम गर्ने कालु मकै खाने भालु
प्रकाशित मिति : २ आश्विन २०७७, शुक्रबार १८:३३
मिडिया क्लब नेपाल, ब्युरो । पछिल्लो समय नेपालमा रेलको धेरै चर्चा हुन थालेको छ । केही समयअघिसम्म रेल सञ्चालन भए पनि हाल रेल सञ्चालनमा छैन । अब भने रेल चल्ने भन्ने हल्ला सँगसँगै केपी ओलीको रेल सपनालाई लिएर यो विषय चर्चामा पुगेको हो ।
नेपालमा रेल सेवा तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमसेरको पालामा बिस्तार भएको थियो ।
रेल सेवा जयनगरदेखि जनकपुरसम्म सन् १९३७ मा सञ्चालन भएको थियो । सोही रेल लिंकको स्तरोन्नति गरेर ब्रोड गेजमा विस्तार गरी त्यही ट्रयाकलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याइने भएको हो ।
राजनीतिकर्मी तथा सरकार सम्बद्ध पार्टिका भातृसंगठनले हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेका केपी ओलीकै ऐतिहासिक सपना साकार भएको, नेपालमा आउनै नसक्ने रेलवे उहाँले नै ल्याएको भनि व्याख्या गरिरहेका छन् । यो पूर्णत भ्रामक छ । नेपालको जयनगरदेखि जनकपुर रेल सेवा सन् १९३७ मा नै सञ्चालन भएको थियो ।
डेन्टपेन्ट गरेर अर्काले बनाएको वस्तुलाई आफूले बनाएँ भनेर प्रचार गर्नु पूर्व निर्माताहरुको अपमान गर्नु हैन र ? रेलको विषयलाई व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको विषय बनाउँनु आत्मरतिबाहेक केही देखिदैन ।
त्यसो त भक्तपुरको पचपन्न झ्याले दरबार, रानी पोखरी, दरबार हाइस्कुल, धरहरा, सिंहदरबार जस्ता कैयौ ऐतिहासिक संरचना पुर्ननिर्माण तथा मर्मतसंभारका कार्यहरु भइरहेका छन्, यी संरचनाहरु पनि केपी ओलीले नै बनाएका हुन् भनेर प्रचार गर्नु पूर्वजहरुको सम्मान हो कि अपमान हो ? के नेपालका राजनीतिज्ञ तथा तीनका कार्यकर्ताहरुले पूर्वजहरुको अपमान गरेर नै आफ्नु ओझ बढाउन खोजको त हैन ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।
नेपालको राजनैतिक इतिहासमा २०४६ सालभन्दा पछि त्यस पूर्व सञ्चालनमा रहेका सरकारी स्वामित्वमा रहेका कपडा उद्योग, रबर उद्योग, चिनी उद्योग, कागज उद्योग, जुट मिल, छाला जुता उद्योग जस्ता दर्जनौ उद्योगहरु बन्द गरिए, अहिलेको दुई तिहाई सरकारले यीनलाई पुर्नजिवित गरी सञ्चालनमा ल्याइदिएको भए नेपाली राजनीतिज्ञप्रति नेपाली जनताले शिर ठाडो पारेर गर्व गर्ने ठाउँ मिल्थ्यो । तर यसो हुन सकेन, बिडम्बना अर्काले बनाइदिएको पुरानै रेलका लिगमा पालिस लगाएर टल्काएकै भरमा पनि गर्व गर्न पर्ने दिन आयो, कठै ! हामी नेपाली कस्तो साम्यवाद तर्फ उन्मुख छौ ? विचार गर्ने कि ?
नेपालमा रेलको इतिहास यस्तो छ :
विगतमा रेल सञ्चालन भए पनि हाल सञ्चालनमा छैन । नेपालको पहिलो रेल नेपाल सरकार रेलवे ७६२ एमएम न्यारो गेज हो । यो रेल सेवा सन् १९२७ मा सञ्चालनमा आएको थियो । तत्कालिन बेलायती सरकारले भारतको रक्सौल–अमलेखगन्ज ३९ किलोमिटर रेल निर्माण गरेको थियो । यसले अमलेखगन्ज–भीमफेदी हुँदै काठमाडौंसम्मको पैदलयात्रा सहज बनाएको थियो । उक्त रेल बाफ (स्टिम) इन्जिनबाट सञ्चालन हुन्थ्यो । रक्सौल–अमलेखगन्ज रेल सन् १९६५ सम्म सञ्चालनमा थियो । महेन्द्र राजमार्गको सञ्चालनमा आएपछि यो रेलमार्ग इतिहास भइसकेको छ ।
दोस्रो रेल अहिले चर्चामा रहेको जयनगर–जनकपुर रेल हो । सन् १९३७ मा सञ्चालनमा आएको यो जयनगरदेखि विजलापुरसम्म सञ्चालनमा हुन्थ्यो। तत्कालीन बेलायत सरकारले नेपालबाट जडिबुटी, काठ तथा खनिज पदार्थ भि†याउनका लागि रेल सञ्चालन गरेको थियो । उक्त रेल पनि न्यारो गेजकै थियो ।
जनकपुर–विजलापुर २२ किलोमिटरको रेलवे ट्र्याक र दुईवटा पुल बाढीले बगाएपछि सन् २००१ बाट रेल सञ्चालन ठप्प भएको छ । यसको लम्बाइ र रेल लिंकको स्तरोन्नति गरेर ब्रोड गेजमा विस्तार गरिँदै छ । यसलाई जयनगर–जनकपुर–विजलापुर–बर्दिबास ६९ किमिसम्म विस्तार गर्ने तयारी छ । भारतले निर्माण गरिरहेको ६९ किमि रेलमार्गमध्ये तीन किमि भारतीय भूमिमा पर्छ ।
जनकपुर–जयनगर निर्माण भइसकेको छ । निर्माणाधीन पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्राष्ट्रिय रेलवे सञ्जालसम्म र्पुयाउन सकिन्छ ।
त्यस्तै, भारतबाट नेपालको सीमानाका वीरगन्जको सुक्खा बन्दरगाहसम्म रेल सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ । यो रेलसेवा कार्गाे (मालवस्तु ढुवानी) का लागि मात्र प्रयोग हुँदै आएको छ ।